China Alucosun FR A2 mveliso kunye nabathengisi | Alucosun
Iipaneli zeAluminiyam ezidityanisiweyo (i-ACP / ACM) ziyimveliso eziguquguqukayo ezidibanisa iimpawu zesinyithi kunye neeplastikhi eziguquguqukayo, iyimveliso eguqukayo kodwa engqongqo kwixabiso eliphantsi ngokuthelekisayo elifanelekileyo kwizicelo ezahlukeneyo ezinje ngeFacade, Roof, Ceiling kunye nokusetyenziswa kwezicelo ezifanayo. isakhiwo. Izinto ezinikezela ngamathuba angenamda okuyila iphupha lakho.
Kukho uluhlu olubanzi lweemveliso zokubopha iAluminiyam, iAlucosun® inikezela kolu shishino. Ezona zibalulekileyo ziimveliso ezidityanisiweyo i-ACP / ACM sithathwa njengesiqhelo esinakho ukwenza iimveliso zodidi lwehlabathi. Ukongezwa kumgangatho weemveliso esizibonisayo ukusayina kukuzinikela kwizithembiso zethu nakwisicwangciso-qhinga seenkonzo zobuchule.
Alucosun ®Iphaneli yeAluminiyam edityanisiweyo ngumboniso wethu obalaseleyo kushishino lokwakha lwehlabathi. Iiphaneli zeAluminiyam ezidityanisiweyo zithathwa njengenye yezinto ezakhayo ezizezinye kwiipaneli zeAluminiyam kukho izinto ezininzi ezenza ukuba yahluke.
IAlucosun FR® Ivavanywa kwaye yaqinisekiswa yiLabs eyaziwa kwihlabathi. Iiphaneli ze-FR zodidi lwe-A2 kunye ne-B (EN13501) eziqinisekisiweyo ngelixa iipaneli eziphambili ze-PE ziziCandelo A (ASTME84) kunye noDidi 0 no-1 (BS476Part6, Part7). Ukongeza, i-Alucosun FR iqinisekisiwe ukuba ihambelane ne-NFPA285 kunye ne-ASTME-119.
Alucosun® Iimveliso ezidityanisiweyo zezixhobo zoBunzima bokuKhanya xa kuthelekiswa ne-olid metallic sheet, iglasi okanye ii-facade ezifanayo ezikhoyo kwi-markt yeli xesha.
I-Aluminium Sheets macala omabini kunye nomgangatho oqhelekileyo we-3MM ye-mineralor thermoplastic core idityaniswe ngokudibeneyo kwiifom zepaneli eziqinileyo ezikwaziyo ukumelana nemikhosi yangaphandle kulwakhiwo lwodonga olungathwali mthwalo.
Alucosun ®I-ACP ziimveliso eziphambili zeflethi ezinobungqingqwa obufanayo obuveliswe ngoomatshini abakumgangatho ophezulu kunye neendlela ezingqongqo zokuQinisekiswa koMgangatho; ibonelela ngenkangeleko ethe tyaba kwaye emnandi kumphezulu wolwakhiwo lweemvulophu.
I-ACP yimveliso enokuphinda isetyenziswe. IAluminiyam kunye nezinto ezingundoqo ziphinda zisetyenziswe kwakhona kwaye zisetyenziswe kwakhona, yiyo loo nto i-ACP ithathwa njengemveliso ye-Eco-Friendly.
Alucosun®Ukuhlanjwa ngamanzi okanye ukucoca okucocekileyo kungasusa uthuli kunye nobumdaka, iindlela zokufaka ezinokulungelelaniswa ngendlela yokutshintsha iipaneli zokulungisa ngomonakalo wengozi njlnjl.
Iipaneli zomdibaniso weAluminiyam ziindleko ezifanelekileyo kwiimveliso zemvulophu xa uthelekisa i-aluminium yetsimbi, i-stainless steelorglass, ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba kunye nemibala eyomeleleyo onokukhetha kuyo.
Imveliso eguquguqukayo enokuthi yenzelwe nakweyiphi na uyilo okanye ubume ngokulula yenza iiphaneli zeAluminiyam eziHlanganisiweyo ukuba zikhetheke kwaye ziyintandokazi kubakhi be-Architects ukwenza uyilo lwabo lokuphupha.
Iiphaneli ze-A2 ziqulathe isiseko kunye nekhompawundi ene-90% yezimbiwa ezingatshiyo ukuqinisekisa umgangatho ophezulu womlilo kunye nokhuseleko.
I-A2 yethu yimveliso edityanisiweyo eyilwe lelona nani liphezulu lezinto ezingenakutsha zimbiwa ezizalisiweyo ezingumbumba apho izinto ezinokutsha zingaphantsi kwe-10%. Iiphaneli ze-A2 zidlula zonke iikhrayitheriya ezingqongqo zokuphendula kwiimvavanyo zomlilo ezikhoyo. Isetyenziswa nakusiphi na isicelo semvulophu yesakhiwo nokuba kungaphandle nophahla lwangaphakathi, ukubopha, isilingi okanye ifadade.
I-Alucosun ® A2 iyangqinelana neemfuno ze-EN-13501 zohlelo lokhuselo lomlilo lwe-A2, NFPA285 kunye ne-ASTM E-119.
Ubukhulu Iyunithi Umgangatho Iyafumaneka
Ububanzi mm 1250, 1500 1000-1500
Ubude mm 3050 R6000
Ukutyeba mm 4 3-6
I-Aluminium ingqindilili mm 0.50 0.30-0.70
Iikhrayitheriya Indlela yovavanyo Iyunithi Ixabiso
Iipropati zomzimba Ukutyeba - mm 4
Ubunzima obuthile - Iikhilogram / M.3 2050
Ubunzima - Iikhilogram / M.2 8.4
Therm. Ukuqhuba I-ASTM C 518 W / (mK) 0.45
Therm. Ulwandiso I-ASTM D 696 X 10-6 / ° C 19
Iimpawu zoMatshini Tensile Strength I-ASTM E8 MPA N / mm2 43
Ukudibanisa I-ASTM E8 % 3.8
2% Ubungqina boxinzelelo I-ASTM E8 MPA N / mm2 41
Ukulahleka kokuhambisa isandi Ukuncitshiswa kwengxolo ASTME413 STC 27
Kwiipaneli zeAluminiyam ezidityanisiweyo Izinto eziphambili zidlala indima enkulu ekumiseleni ipropathi yomlilo yesakhiwo. Ngaphandle kokuncama naziphi na iipropathi ezisisiseko seepaneli zeLwandle i-ACP-A2, i-ACP-FR ziyimveliso eyilelwe ukugubungela umlilo kunye nezithethe zokhuseleko kwihlabathi liphela.
Ukuthelekiswa kokuSebenza koMlilo
I-Alucosun FR-A2 IAlucosun FR I-Alucosun PE
Ukutyeba 4 4 4
Izinto ezinokutsha kwiCore <10% <30% <100%
Imigangatho BS / EU EN13501-1 (A2 s1 d0) EN13501-1 (B s1 d0) -
Imigangatho yaseMelika I-NFPA 285 (Ipasisiwe), ASTM E119 (Ipasisiwe) I-NFPA 285 (Ipasisiwe), ASTM E119 (Ipasisiwe) -
Ostreliya / Nyu Zilend AS / NZS 1530.3 (Akukho ucinezelo) AS / NZS 1530.1 (Akukho ucinezelo) -
Jemani I-En1187 (Ipasisiwe) DIN41027 (Ipasisiwe) I-En1187 (Ipasisiwe) DIN41027 (Ipasisiwe) -
Singapho EN13501-1 (A2 s1 d0) EN13501-1 (B s1 d0) -
I-UAE EN13501-1 (A2 s1 d0) NFPA 285 (Ipasisiwe) EN13501-1 (B s1 d0) NFPA 285 (Ipasisiwe) -
Imibala kunye nokugqiba
Imibala eyahlukeneyo kunye nokugqiba okukhethwa kukho kwenza i-Alucosun ACP ibe lukhetho oluthandayo kwimvulophu yokwakha. Ukwahluka kwembonakalo, ukuhlala kwenkqubo yepeyinti esemgangathweni wokugqiba njl.njl. Yenza isuti nakusiphi na isicelo sokubopha nokuba sisakhiwo sentengiso, isakhiwo sodumo nesazisi esikhethekileyo okanye uphawu olumiselweyo. I-Alucosun ACP ibonelela ngendidi zemigangatho kunye nesiko kugqitywa ngaphakathi kwindlu yokufaka iikhoyili. I-Alucosun ACP igqityiwe ngomphezulu nge-PVDF kunye ne-NANO inkqubo yepeyinti kwinkqubo eqhubekayo yokuthambisa iikhoyili eqinisekisa umgangatho kunye nokuhambelana ngokuhambelana nemigaqo ye-AAMA 2605.
IPVDF Inkqubo yepeyinti ene-resin ye-70% ye-PVDF yaziwa ngokunganyangeki kwimitha ye-UV kunye nefuthe lokusingqongileyo ngenxa yoko yi-Alucosun® ukusebenza okuzinzileyo nokungaguquguquki kwiimeko zemozulu ezibi kakhulu.
FEVEIipeyinti ziyaziwa ngokuzinza kwazo okugqwesileyo. Ezona zinto zibalaseleyo zeekhemikhali kunye nezinto ezibonakalayo zale peyinti esemgangathweni ziye zaqatshelwa kwaye zabonakaliswa ngabasebenzisi behlabathi kunye nabayili bezakhiwo kule minyaka ingamashumi amane idlulileyo kwaye ngoku oku kusaqhubeka mihla le.
UNANO- PVDFyinkqubo yokupenda yokuzicoca. Inkqubo yepeyinti enjalo ibonelela ngengubo ephezulu ecacileyo enezinto ezinqamleze kakhulu zeNANO kwisiphelo sePVDF; eqinisekisa umphezulu ogudileyo. Umphezulu ogudileyo kunye nocacileyo wenza ukungcola nothuli lokuncamathela ekuncamatheni kulo okunika isakhiwo ukujonga okucocekileyo rhoqo. Inkqubo ye-PVDF kunye ne-NANO yepeyinti yomelele kakhulu iqinisekisa iminyaka eli-15 ukuya kwengama-20 yokugqiba iwaranti.
UXELWEIiphaneli ezineendlela ezahlukeneyo zokugqiba ziyafumaneka kwi-Alucosun nangona kunjalo kuxhomekeke kwixesha elithile kunye nobukhulu ® ukusikelwa umda. Ngokwemvelo kukhuselwe iiphaneli zokwaleka kwe-anodized kuyomelela kakhulu ukumelana nokukrwela kunika iwaranti malunga neminyaka engama-30.
I-PE kunye ne-HDPE Iipeyinti zisetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezininzi ngenxa yemibala eyahlukeneyo kunye noqwalaselo lwezoqoqosho, ngoku iminyaka yesiqinisekiso inokwandiswa ukusuka kwiminyaka emi-5 ukuya kwiminyaka esi-8 ngeentlobo ezahlukeneyo zokwaleka.
Nangona isetyenziswa ngokwesiqhelo iAluminiyam iipaneli ezidityanisiweyo kukufakwa eludongeni kunye nokusetyenziswa kwezentengiso, kule mihla isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo afana nokuhombisa, umboniso, izithuthi ezinjengeekhonteyina zecontainer, oololiwe, iinqwelomoya, iinqanawa, ifenitshala, izinto zokwakha njlnjl.I-ACP yinto eguqukayo Ingasetyenziselwa ngokudibeneyo kunye nengcinga yoyilo kunye noyilo lokuyila ubuhle bendalo. Ukungafaniyo kwizicelo kuyasikhuthaza ukuba sikhangele kwaye siphuhlise ukugqitywa okungaqhelekanga ukwenza umdla wokubonelela ngeendlela ezingenamda. Ezinye zezinto eziphambili ezigqityiweyo ezikhoyo kwiimveliso zethu zeAluminiyam zinje ngezantsi, nangona kunjalo azikhawulelwanga apha; ukuba unokucinga ukuba singayenza.
AT NGOKWENDALO - ICOPPER, IZINC, ITITANIUM ENGANASETYENZISWA
IPVdf Iipropathi zokupeyinta
Ukwaleka kwealuminium PVDF
S. Hayi Iparameters Umgangatho wovavanyo Iziphumo
1 Gloss @ 60 isidanga I-ASTM D 523 20-80
2 Ukuqina (T-bend) I-ASTM D1737-62 2T, akukho kuqhekeka
3 Ukubuyela umva kwempembelelo I-NCCA II-5 Akukho ukukhetha
4 Ukuqina-ipensile I-ASTM D3363 H2H
5 Unamathele I-ASTM D3359 Akukho ukukhetha
Yomile Indlela yesi-8 Akukho ukukhetha
Imanzi 37.8 ° C, iiyure ezingama-24 Akukho ukukhetha
Amanzi abilayo 100 ° C, 20 imiz
6 Ipeyinti Ukutyeba (μm) AAMA2604 I-25-36 μm ixhomekeke kumaleko wokutyabeka
7 Ukumelana esirhabaxa I-ASTM D968-93 Iilitha ezingama-40 / mil
8 Ukuchasana neMichiza I-ASTM D1308-87 Akukho tshintsho
Ukuchasana ne-Acid I-ASTM D1308-87 Akukho tshintsho
Ukumelana nealkali I-ASTM D1308-87 Akukho tshintsho
Ukumelana nesinyibilikisi I-AAMA 2605-05 Akukho tshintsho
9 Uvavanyo lwemozulu-o-mitha: I-ASTM D2244-93 Ubukhulu. Iiyunithi ezi-5 emva kweminyaka eli-10
Ukugcinwa kombala I-ASTM D523-89 Yi-50% emva kweminyaka eli-10
Ukugcinwa kwamagama I-ASTM D4214-89 Ubukhulu. Iiyunithi eziyi-8 zemibala kunye ne-6
Ukuxhathisa itshokhwe Yabamhlophe emva kweminyaka eli-10
10 Ukuxhathisa ngetyuwa I-ASTM B117-90 Ukupasa (400hrs X5% NaCl)
11 Ukuxhathisa ukufuma I-ASTM D2247-94 Akukho blisters emva kwama-4000 hrs, 100% RH, 38 ° C
Indlela ekucetyiswa ngayo yokuCoca
Ubungakanani kunye nohlobo lokuhlanjwa kwesakhiwo kuya kuxhomekeka kwizinto okanye inkqubo, indawo ekuyo nendawo ekuyo ngaphakathi kwisakhiwo, kunye nenqanaba lokucoca elifunekayo. Ulondolozo oluqhelekileyo ngumsebenzi oqwalaselwa ngokubanzi njengemfuneko ukufezekisa ukuzinza okulindelweyo.
Bambelela kubenzi okanye kubacebisi ngezindululo zokulondolozwa Ngexesha lokucoca, izixhobo zokufikelela ezinje ngeleli, isiteji, isoftware yokuhamba, iikhethi zecherry okanye ezifanayo, kufuneka zilungiswe ngeepads ukukhusela iiphaneli kwimpembelelo. Ukucoca okungalunganga okukhokelela kumonakalo wokudibanisa akuyi kuhlawulwa ngokwemiqathango kunye neemeko zewaranti yemveliso.
Sukusebenzisa izinyibilikisi ezinamandla.
Sukusebenzisa ialkali eyomeleleyo, iasidi eyomeleleyo okanye izicoci zirhabaxa. Ukuba ezi nyibilikisi kunye nezicoci bezisetyenzisiwe, ipeyinti inokudumba, iflake okanye iqhekeke.
Sukusebenzisa amanzi oxinzelelo oluphezulu ukucoca njengoko oku kunokubangela ukonakala kwitywina elidibeneyo okanye kubangele ukuba ipeyinti isuswe. Ukuqhushumba kwamanzi akukhuthazwa.
Sukuxuba izicoci ezahlukeneyo. Ukuba abacoci kufuneka baxutywe, ii-asee zilandela imiyalelo yokwenziwa kwazo.
Gwema ubushushu obugqithisileyo ukucoca umphezulu owogutyungelweyo. Imiphezulu yelanga eshushu (ngaphezulu kwama-40 ℃) inokukhawulezisa ukusabela kweekhemikhali kwaye inokukhupha umphunga wamanzi kwisisombululo esishiya intsalela kunye namabala. Ngokuchasene noko, amaqondo obushushu asezantsi kakhulu anokunika iziphumo zokucoca ezimbi.
Alucosun ®Iphulo leWisdom Metal Composites Ltd ezisa iimveliso ezingaphelanga ngokusebenzisana neziko lethu lemveliso elibhiyozelweyo eliseJiangsu, elinamava amalunga namashumi amabini amava atyebileyo kwiAluminiyam yePhaneli yeShishini. Isicatshulwa a®uphawu olubonelela zonke iipaneli zakho zokwakha, zixhotyiswe ngazo zonke izinto ezingaphakathi endlwini ukuqinisekisa imveliso esemgangathweni kunye nokuzibophelela ngokuhambisa. Sinikezela ngeemveliso ezilungileyo ngokugqibelela kokugqibela; kufezekiswe ngumxube ofanelekileyo weengcali zeshishini, itekhnoloji yakutshanje kunye noomatshini abaphucukileyo. Indawo esekwe ukuvelisa ngaphezulu kwe-10Million M2 ngonyaka, nezityalo ezintathu (3) zemveliso eyahlukeneyo yePhaneli, ukuDibanisa imibala kunye neLebhu yangaphakathi neNdlu enezixhobo.
Alucosun®isebenza kuyo yonke iMpuma Ekude, kuMbindi Mpuma, eLatin America, eYurophu naseMelika. Iiofisi zethu zommandla, oogxa bethu kwezorhwebo, iiarhente kunye nabasasazi kuwo wonke ummandla basivumela ukuba sihlangabezane neemfuno zakho zezinto zokwakha kunye neenkonzo zenkxaso naphina apho ufuna khona.
Egqithileyo Iphaneli yeAluminiyam edityanisiweyo
Okulandelayo: IAlucosun FR